Iowa guyyaa har’aa corona virus nama qabame 200,000 surpassed taate jirti, nama haarawa qabame 4,359 | KWIT
Oromo News 11.20.20
Iowa guyyaa har’aa corona virus nama qabame 200,000 surpassed taate jirti, nama haarawa qabame 4,359 waliin. Namni biraa haarawni 25 sababa corona virus du’ani jiru, akkaata gabaasa website, coronavirus.Iowa.gov.
Woodbury County tti se’aati 24 keessati namni haarawa virus Kanaan qabame 127 dha. Manni fayyaa Sioux land akka gabaaseti namni harawa due nama tookko yoo tau isiinis nama umriin isii 61-80 jidduu jirtuudha.
Sioux city Community school district irraa gabaasa covid-19 kan torbaani akka mullisutti namni bayen akka qabameedha. Namni qabames barrattoota 34 fi hojattoota baayinnan kan qabamaniidha building 11 keessati. Torbaan darbe 32 ture.
Ammati mannii barumsa kamuu Emergency jala kan kaahame hin jiru.
West middle fi bakkeen dhuunfa afur kara baruma online tti deebisani jiru.
Tyson food kan booyye hogantoota isaa gurguddoon yeroo amma dhukkubni akkanatti baayate kana nama meeqatu qabame yeroo amma kana jechuun qorannoofi haasawa gochuu jiru.
Presdantii Tyson fi CEO Dan Bank akka jedhanitti baaye kan aaraniidha. Waaye Himannaa falmuu manager iddoo dalagaa Waterloo Iowa irraa nuti jara bakka hin buunu kaampaani fi akka buaa hin qabne himan.